ऋषि धमलाको सासू झनै कडा, “छोरी, ज्वाई”को सम्बन्ध बारे यस्तो भन्छिन् ! (भिडियो हेर्नुहोस) « हाम्रो ईकोनोमी
ऋषि धमलाको सासू झनै कडा, “छोरी, ज्वाई”को सम्बन्ध बारे यस्तो भन्छिन् ! (भिडियो हेर्नुहोस)
चर्चित पत्रकार “ऋषि धमलाकी सासु छोरी र नाति नातिना” सहित मिडियामा आएकी छिन् ।
निकै ब्यस्त पत्रकार धमलालाई छोरी दिएपछि आँफु अहिले निकै प्रफुल्लित भएको बताएकी छिन् ।
समय बलावान् भएको बताउँदै आफुले छोरी एरिकालाई ज्वाई धमलाको जिम्मा लगाउन पाउँदा ढुक्क भएपनि आँफुहरु सात समुन्द्र पारीको बसाइमा रहेका कारण भने मन खल्लो हुने कुरामा खिन्नता देखाइन् ।
हाल क्यानडामा रहेकी धमलाकी सासुले पत्रकार ज्वाई धमलाका विषयमा बनाइने टाइटलका विषयमा भने केही असन्तुष्टी देखाइन् । थप भिडियोमा हेर्नुहोस् ।
* सफलता के हो ? सफलता कसरी प्राप्त गर्ने ? (यो पनि पढ्नुहोस)